फुलबारी कफि सप " न कुनै फुल फुल्छ न कफि नै बन्छ
बागबजार , धेरै जसो समय यहि बित्छ । साथीभाइ, नेता , कार्यकर्ता सबै एकै ठाउँ भेला हुन्छन , रमाइलो लाग्छ । समय बितेको पत्तो हुन्न !
कता हो कमरेड भनेर सोध्नेहरु लाई म सिधा यहि उत्तर दिने गर्छु - आउनुस न भेटम यहि छु हार्दिक मा !
होटेल हार्दिक सबै जसो नेता कार्यकर्ताहरु को लागि भेटघाट गर्ने जक्सन नै भएको छ । संचालक र होटेल म्यानेजर दुबै कम्युनिस्ट भएकाले पनि यहाँ अलि सजिलो छ भेटघाट का निमित्त । जस्लाइ जति समय बस्न पनि फ्री छ , पानी पनि निशुल्क साथमा wifi free zone. बडो गज्जबको !
यहाँ एक कप चिया पिउने हो भने रुपैयाँ ५० हुनुपर्छ , कहिले काहीँ कसैले पिलाए , पिइदिन्छु । मीठो छ , गुलियो ! आजकाल केही मैले चिनेका अग्रजहरु चिया अफर गर्ने हैसियत मा पुगेका छन कहिलेकाही अफर गर्छ्न । जीवन मा आउने परिवर्तनको क्रान्तिकारी छलाङहरु कस्तो हुने रैछ , यहाँ बसेर अध्ययन गर्छु । धेरै समय वर्ग उत्थानका लागि लडेका क्रान्तिकारी कम्रेडहरु के उत्थान गर्दै छन , कस्तो गर्दै छन अन्योल मा पर्छु र सिधा फुलबारी कफि सप तिर लाग्छु ।
"फुलबारी कफि सप " न कुनै फुल फुल्छ न कफि नै बन्छ ।
यो सप सिन्धुपाल्चोक घर भएका एक भुपु नेपाली सैनिकको हो । यिनको राम्रो आम्दानी हुन्छ , यहाँ । अग्ला र जोसिला देखिने यी बुढा पनि कम्युनिस्ट पार्टी नै निको मान्छ्न । बागबजार का लगभग सबै ज्यालादारी हरु यहाँ खाजा खान पुग्छन । एक कप चिया रुपैयाँ १५ मा पाइन्छ, म पनि धेरै जसो यहीँ पिउने गर्छु ।
यो सपमा म धेरै श्रमिकहरु को जीवनकाल नियाल्ने गर्छु । ज्यालादारी गरेर जीवन चलाउने धेरै भेटिन्छन । ज्याला मजदुरी सन १७६० देखि हाल सम्म यथावत छ । यिनै मजदुरहरु को बल जगमा सन १८३० मा औधोगिक क्रान्ति भएको थियो , जो ठुलो क्रान्तिकारी आन्दोलन हो ।
यहाँ हरेक ज्यालादारीहरु अभावलाइ लुकाउदै कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ मुक्ति मिल्छ भन्ने आशा बोकेर अहिले आशावादी भएका छन, ती पहिले धेरै जसो क्रान्तिकारी थिए ।
म लगायत मेरा अन्य साथीहरू कमरेड दिपुकर र कमरेड सुरेश , हामी सन १८४८ को मार्क्सवाद को सिद्धांत मा छलफल गर्ने गर्छौ र यसको सान्दर्भिकता अझै धेरै छ भन्ने निचोड मा पुगेका छौँ । अहिले हामी सन २०१८ मा छौं , तर कुरा धेरै पहिलेको , सप मा आउने मानिसहरु हाम्रा कुरा सुनेर छक्क परेको देख्छु ।
२५ बर्ष पहिले पार्टीले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम "जनताको बहुदलीय जनवाद" को अर्ध-सामन्तवाद र अर्ध-उपनिवेशवाद भित्र बनेका नीति तथा कार्यक्रम को च्याप्टर क्लोज भएको कुरा लाई हामी आत्मसात गरेका छौँ र नयाँ च्याप्टर ओपन गर्नु पर्छ अब भन्ने कुराको छलफल मा छौँ ।
समाज हिजो कस्तो थियो आज कस्तो छ र अब कस्तो बनाउने हो भन्ने कुराको त्यति धेरै कुराकानी र गोस्ठी हुन सकेको छैन । अहिले धेरै जसो नेताहरु समाजको परिभाषा र अस्तित्वलाइ त्यति धेरै महत्त्व दिदैनन । तर समाज बदल्नु पर्छ भन्ने भासण भने गरि रहेछन । यी दुखी आत्मा हरु प्रती मेरो हार्दिक श्रद्धाञ्जलि ! यिन्ले परिवर्तन को "प" पनि गर्न सक्दैनन् ।
इन्टरनेटको दुनियाँ छ , सबै जसो नीति तथा कार्यक्रमहरु फेसबुक बाट नै सार्वजनिक हुने गर्छन् । आर्थिक रुपमा पारदर्शी हुन खोज्या होला त्यही भएर सभा, गोष्ठी र कार्यक्रमहरु नभएका , यो पनि राम्रै छ , किनकी समाज बद्लिएको छ ।
नेताहरुले आफ्ना पार्टीका सदस्यहरु नचिन्ने कुरालाई म त्यति धेरै अर्थपूर्ण मान्दिन । म आफै दलित विद्यार्थी जो कम्युनिस्ट पार्टी प्रती आस्थवान छन त्यो कमिटीको अध्यक्ष छु तर मलाइ केन्द्रिय अध्यक्षले नचिनेको हुन सक्छ किनकी मैले फेसबुक मा लेखेको छैन , सम्प्रेषण गरेको पनि छैन । यस्ता धेरै होलान् !
तर बिचलित छैन, ढुक्क छु समाजवादी हुने कुरामा , पार्टीले पनि त्यहि उन्मुख भनेको छ र संविधान ले पनि ।
समाज दलाल पुजिपतीहरुको चरित्रबाट ग्रसित छ र पार्टीहरु पनि । यिनिहरुको अन्त्य पनि यहि पुजीवादी नीतिहरु आफै हुन भन्ने बुझेको छु , तसर्थ त्यति आत्तिएको छैन , पराजित पक्का हुनेछ्न ।
एकदिन NTV को wide angle कार्यक्रममा जनवादी गायक कम्रेड जीवन शर्मा लाई हेर्ने मौका पाए । उहाँ भन्नुहुन्छ , " म यस मानेमा धनी छु किनकी म सग धन छैन , धन बिनाको धनी ! समाज धनिहरुको गरिबी र दरिद्रताले ग्रसित छ !" बडो अर्थपूर्ण लाग्यो र सलाम गरे कम्रेड शर्मालाई !
आजकाल म दर्शन बुझ्ने जमर्को गर्दै छु । प्रकृति , जीवन , समाज र चिन्तन यी चार कुराले बनेका छन दर्शनहरु , मार्क्सवाद पनि त्यही मध्यको एक हो ।
समाजको अस्तित्व लाई केही खोज्दै र बुझ्दै परिवर्तनको लागि हिड्ने कोसिस मा छु । यात्रा निरन्तर छ , कल्पित साम्यवाद तर्फ !!